हतारमा जुस पिउने कि फुर्सदमा फलफूल खाने ? - TV Annapurna
हतारमा जुस पिउने कि फुर्सदमा फलफूल खाने ?
January 12, 2019 January 12, 2019 Annapurna TV
रफ्तारमा रहेको जिन्दगीमा हरेक काम फटाफट हुनुपर्छ । भनेपछि खानपानमा किन ढिलाइ ? फलफूल खाएर समय किन खेर फाल्नु ?
फलको जुस निकाल्यो, खायो अनि हिँड्यो कामतिर । समय पनि जोगिन्छ, स्वास्थ्य पनि राम्रो ।
साँच्चै ? के फलफूलको रस निकालेर पिउनु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ त ?
अहिलेका कामकाजी मान्छेहरुसँग समय नभएकाले फलफूलको रस पिउने चलन छ । फलफूल चपाएर खाने समय कहाँ र ?
बिहानै जुस बुत्यायो कामतिर कुद्यो । स्वास्थ्यको चिन्ता पनि दूर भयो । धेरैको बुझाइ छ कि जु शरीरमा रहेका बिकार निकाल्न सहयोग गर्छ।
यसैको फाइदा फलको जुसको कारोबार गर्नेहरु उठाइरहेका छन्। सन् २०१६ मात्रै फलफूलको जुसको कारोबार एक सय ५४ अर्ब डलर बराबर भये । यो वर्षेनी बढिरहेको छ।
चिनीको प्राकृतिक स्रोत फलफूल नै हुन् । जुन हरेक फलमा बढी वा घटी पाइन्छ नै । यदि सन्तुलित रुपमा लिएमा यसलाई हानिकारक मानिदैन । जब हामी फल खान्छौ त यसमा रहेको फ्रक्टोजका साथै फाइबर पनि शरीरमा पुग्छ । फाइबरलाई टुटाउन र रगतमा घुल्न समय लाग्छ।
तर जब हामी जुस लिन्छौं, त्यतिबेला फाइबर छुटिन्छ र फ्रक्टोज र केही भिटामिन मात्रै शरीरमा जान्छन् । हामी फलको रस मात्रै लिन्छौं भने द्रूत रुपमा फ्रक्टोज रगतमा मिल्छ । यसले रगतमा चिनिको मात्रै एक्कासी बढाउँ५ । त्यसपछि अग्नाशयले इन्सुलिन नामक हर्मोन छाड्छ । जसले चिनिको मात्रा नियन्त्रण गर्छ।
जब यस्ट्टव लगातर बढ्छ भने टाइ टू डायबिटिज हुने सम्भावना बढ्छ । सन् १९८६ देखि २००९ सम्म भएको एक रिसरचुले फलको जुस लिनुको सिधा असरका रुपमा टाइफ टू डायबिटिज भएको पाएका थिए।
धेरै रिसर्चमा फलफूलको जुस धेरै पिउनु हानिकारक देखिएको छ। यसबाट मोटोपनको समस्या समेत देखिएको छ।
धेरैले जुस शरीरमा रहेको बिकार बाहिर निकाल्छ भनेर पनि पिउने गरेका छन्। जस्तै मदिरा, ड्रग वा यस्तै हानिकारक तत्व निकाल्न जुसको सहारा लिनेहरु पाइन्छन् । तर, त्यो सत्य होइन । यस्तो तत्व निकाल्ने कुरा जुसमा होइन, फलफूलमा पाइन्छ । जुन जुस निकाल्ने क्रममा खेर जान्छ । फलफूल खाँदा पेट अघाएको महशुस समेत हुने भएकाले कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम गर्न समेत सहयोग पुग्छ । त्यसैले जुस खान हतार गर्नु भन्दा स्वास्थ्यका लागि फुर्सद निकालेर फल खानु उचित हुन्छ । बीबीसीबाट
ओझेलमा दाङकै ठूलो दह
वाईडबडीले उब्जाएको गम्भीर प्रश्न !
विजय ज्ञवाली जहाजले उडाउँदैन मात्रै, डुबाउँछ पनि । अझ नेपालको हकमा भन्ने हो भने जहाजले निगमलाई...
छालालाई मुलायम र सुन्दर बनाउने घरेलु उपाय यी हुन्
ओलिभ ओइल प्राकृतिक तेलले छालालाई मुलायम बनाइराख्न निकै सहयोग गर्छ । हाम्रो छालालाई सुक्खा हुनबाट बचाउन ओलिभ...
नेपालमा गरिब र धनीबिचको खाडल पुरिन १ लाख वर्ष
–प्रकाश सिलवाल नेपालमा सबैभन्दा धनी व्यक्ति र अति कम गरीब नेपालीको सम्पत्ति असमानताको अन्तर कति होला...
हाच्छिउँ किन रोक्नु हुँँदैन? यस्ता छन् हाच्छिउँ सम्बन्धी ७ रोचक तथ्य
हाच्छिउँ रोक्ने प्रयास तपाईंको लागि प्राणघातक हुन सक्छ भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ? डाक्टरहरुका अनुसार, हाच्छिउँ आउँदा...
जाडोमा खानुहोस् यस्तो खाना
जाडोमा न्यानो महसुस हुने खाना खानुपर्छ । यतिबेला झोल कुराहरूजस्तै चिकेन सुप, मसरुम सुप, भिटामिन सीयुक्त...
हेर्नुहोस् यी हुन सन् २०१८ का विश्व चर्चित घटना
वर्ष सन् २०१८ मा पनि अमेरिकाको चर्चा र भूमिका धेरै देखियो भने अन्य देशका विभिन्न घटनाहरु...
झाडुवाला, झोलावाला हुँदै कामदार बन्न तयार यी युवा
कहिले काठमाण्डौंमा राति सरसफाइ गरेर झाडुवाला त कहिले स्वयम्भूको डाँडामा गीत गाएर गाइने । केही समय...
December 31, 2018 TV-Annapurna 0
–कृष्ण अधिकारी जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिने कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडजस्ता हरित गृह ग्यासको...
December 21, 2018 Annapurna TV 0
मुम्बई, भारत, “फेसबुकबाट प्रेमसम्बन्ध स्थापित नगर्नुस् अन्यथा मैलेजस्तो दुःख पाउनुहोला,” पाकिस्तानी जेलमा छ बर्ष जीवन विताई...
अनुसन्धाताहरुले प्रारम्भिक तथ्याँकहरुको विश्लेषणबाट मोबाइलजस्ता स्मार्ट उपकरणको बढी प्रयोग गर्ने तथा भिडियो खेलमा बढी समय बिताउने...
मासुमा भन्दा बढि प्रोटिन पाइन्छ गेडागुडीमा, यस्ता छन् फाइदाहरु
विभिन्न प्रकारका दाल, सिमी, चना, केराउ, राज्मा, भटमास, मेथीलगायतलाई गेडागुडी भन्ने बुझिन्छ । गेडागुडीमा अत्यधिक मात्रामा...
दलालको नेतृत्वमा नेविसंघः खल्तीका प्रतिनिधि आउने बिधान कतिले स्विकार्ने ?
हृदय उपाध्याय नेविसंघको इतिहासमा कालो बादलः सञ्जालमा मात्रै क्रान्तिकारी देखिने कथित नेतृत्वलाई उदाङ्गो पार्न जरुरी !...
‘घर बाहिर गएकी महिलाको यौन व्यवहारबारे प्रश्न उठाइन्छ’
बेचबिखनमा परेका महिलाहरूको उद्धार गरिएपनि उनीहरूको पारिवारिक र सामाजिक पुनर्मिलन गराउन नसक्दा उनीहरू फेरि पनि बेचिने...
November 17, 2018 TV-Annapurna 0
November 15, 2018 Annapurna TV 0
के तपाँई घरमा कुकुर पाल्नुहुन्छ ? यस्ता छन् कुकुर पाल्नुका फाइदाहरु
अमेरिकन हर्ट एसोसिएसनले गरेको एक अध्ययनले घरेलु जनावर पाल्ने मान्छेहरुमा मुटुरोगको सम्भावना कम हुने तथ्य बाहिर...
November 15, 2018 TV-Annapurna 0
तपाईँको स्मार्ट फोन तातेर हैरान हुनु हुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
तपाईँ पक्कैपनि स्मार्ट फोन प्रयोग गर्नु हुन्छ होइन ? त्यो हो भने फोन तातेर हैरानपनि हुनु...
November 07, 2018 Annapurna TV 0
के यिनै हुन नेपालका १० धनी व्यक्ति, जसलाई लक्ष्मीको आर्शिवाद मिलिरहेको छ
नेपालीहरुको दोस्रो ठुलो पर्व तिहारको रमझम छाईसकेको छ । पाँच दिनसम्म मनाइने यमपञ्चकको आज तेस्रो दिन...
विहे भएको दुई वर्षमै छोडेर मलेसिया पसेका श्रीमानले उतै विहे गरेपछि श्रीमतीको बिचल्ली
आलोक यादव । श्रीमान मलेसियामा दोस्रो विबाह गरेपछि कर्जन्हा नगरपालिका बडा नम्बर ११ का ३५ वर्षीया...
November 02, 2018 TV-Annapurna 0
कुन देशको लोकप्रिय खाना के ?
नेपालीहरूमा भ्रमणप्रति रूचि बढ्दै गएको छ । आफ्नो हैसियतअनुसार स्वदेश वा विदेशको भ्रमणमा निस्कने नेपालीहरूको संख्या...
October 31, 2018 TV-Annapurna 0
स्वस्थ रहनु छ भने यी खानेकुरा खान नछुटाउनुहोस्
अत्याधुनिक जीवनशैलीको सबैभन्दा ठूलो असर मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने गरेको छ । लामो समयसम्म कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने...
बालबालिकामा कसरी उत्पन्न हुन्छ मानसिक समस्या?
बाल अवस्थामा पनि मानसिक समस्या वा रोग हुन्छ भन्ने धेरैजसो मानिसलाई थाहा नै हुँदैन। तर, युवावस्था...
October 26, 2018 TV-Annapurna 0
के तपाँईलाई अनिद्रा छ ? यस्ता छन् कारणहरु
– असन्तुलित भोजन अनिद्राको एउटा कारण हो । त्यसैले हरेक रात समयमै खाना खाने लक्ष्य बनाउनुस्...
October 23, 2018 TV-Annapurna 0
एउटा मन्दिर जहाँ रजस्वला भएको बेला पनि जान पाइन्छ
भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय सुनाउँदै सबै उमेर समूहका महिलालाई केरलाको सबरीमाला मन्दिरमा प्रवेश दिन भनेपछि...
October 22, 2018 Annapurna TV 0
छिट्टै थकान महसुस हुन्छ ? त्यस्तो हो भने यी कुराहरु गर्नुहोस्
अहिले हरेक व्यक्तिहरुको दैनिकी निकै व्यस्त छ । बदलिँदो खानपान र अव्यस्थित जीवनशैलीका कारण स–साना काम...